POLICE AT HARVEST HOUSE 01-17
MDC-T inotungamirwa naMuzvare Thokozani Khupe, inoti yakatora muzinda weMorgan Richard Tsvangirai House murunyararo neChina manheru asi MDC Alliance yaVaNelson Chamisa ichiti muzinda wayo wakabvutwa nechisimba pachishandiswa mapurisa nemauto aive nezvombo zvehondo.
Munyori mukuru muMDC-T yaMuzvare Khupe, VaDouglas Mwonzora, vaudza Studio7 kuti vakatora muzinda uyu murunyararo uye pakazoitika mhirizhonga apo munyori mukuru muMDC Alliance, VaCharlton Hwende, vakaenda nevechidiki vebato ravo vachida kupinda pamuzinda uye nechisimba.
Asi mutauriri weMDC Alliance, Muzvare Fadzai Mahere, vaudza Studio7 kuti pakashandiswa chisimba nemapurisa nemauto nevechidiki vebato raMuzvare Khupe kubvuta muzinda uyu.
Kunyange hazvo VaMwonzora vati vari kushandisa mutemo zvichietevera mutongo weSupreme Court wakapa masimba kuna Muzvare Khupe, Muzvare Mahere vati zvakaitwa zvekubvuta muzinda wavo zviri kunze kwemutemo.
Asi VaMwonzora varamba kuti vakashandisa mapurisa nemauto.
VaMwonzora vati havazi kuzobvumidza vanhu vasina mvumo kupinda muMRT House kudzamara vaita musangano weExtraordinary Congress uye vati VaChamisa havasi kuzopinda mukongiresi iyi sezvo vakadzingwa muMDC –T naMuzvare Khupe svondo rino.
Muzvare Mahere vati MRT House ndiwo muzinda webato ravo uye vacharamba vachirwisa kuti vatore muzinda wavo pamwe nekusunungura ruzhinji rweZimbabwe.
Hatina kukwanisa kunzwa divi remapurisa panyaya iyi uye pataenda pamhepo tange tisati tawana mhinduro kubva kubazi remauto.
Asi magwaro aratidzwa Studio7 anoratidza kuti nyaya iyi yava mumatare zvichitevera danho rakatorwa nasachigaro weMDC-T, VaMorgen Komichi, rekuti MDC yaVaChamisa isavhiringa, kana kurwisa vanhu vakachengetedza muzinda uyu, uye kukomekedza mapurisa kuti asabvumidza chikwata chaVaChamisa kushandisa Morgan Tsvangirai House.
Nyaya iyi ichanzwikwa mudare musi waChikumi 9, 2020.
Muzinda wemumiriri weAmerica muZimbabwe waisa mashoko paTwitter uchiti uri kushushikana nekushandiswa kwemapurisa nemauto mukutorwa kwemuzinda webato rinopikisa, uchiti kuti pave nehutongo hwejekerere, zvakakosha kuti munyika muve nemapato anopikisa akasimba.